Iphupha malunga nesikrufu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngamanye amaxesha xa sizenzakalisa, nje ukuba laphola inxeba, sishiya inxeba. Kwiimeko ezininzi, izikrakra ziya kuphela ngaphezu kweminyaka. Kodwa ezinye zihlala zibonakala ebomini kwaye zisikhumbuza okwenzekileyo kwixesha elidlulileyo, ukwenzakala.
Ugqirha kufuneka athunge ikakhulu ukusikeka okunzulu xa esenza okanye kwigumbi likaxakeka esibhedlele ukukhuthaza ukuphilisa amanxeba kunye nefuthe elifanelekileyo ekubunjweni kwesikrelemnqa. Oku kwenzakala kakhulu kwenzeka kwiingozi okanye kwimeko yokwenzakala emzimbeni, umzekelo, xa kukho umntu ohlatywa ngokunzulu ngenxa yokuhlaselwa ngemela.
Ukuba inxeba libonakala kuthi njengophawu lwephupha, oku kunokuba nentsingiselo ebalulekileyo. Kwenzeka ukuba kwimeko yephupha ubona omnye umntu enesikrelemnqa, njengoHarry Potter, kodwa ngokufuthi nawe unalo ephupheni. Kwiimeko ezininzi, inxeba esinalo ngesiquphe emzimbeni wethu emaphupheni alikho ngokwenyani. Kodwa yintoni kanye kanye enokuthi intsingiselo yephupha?
1 Uphawu lwephupha «isiva» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isiva» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isiva» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenyani, amanxeba athathwa njengesiphene, into engabonakali intle. Isikrelemnqa sikwatolikwa gwenxa ukuba uphupha ngaso emzimbeni wakho. Ufuziselwa apha ngu amava amabi Itolikiwe
Ukuphupha kunamava okuthatha isigqibo kwixesha elidlulileyo, ongekaliphumeleli ngokupheleleyo. Isamphembelela kubomi bakhe bemihla ngemihla, iyamsinda kwaye imthintele ekubeni akhule ngokukhululekileyo. Ukongeza, woyikisa ngokudibana nomntu kwixa elizayo ophethe ukungalingani kwengqondo. Kubalulekile ukuba usebenze kwinto oye wahlangabezana nayo, mhlawumbi ngoncedo lobuchwephesha, kwaye uzikhulule kwimithwalo.
Ukuba ubona isikhumba komnye umntu, iphupha liyalumkisa Ukungaphumeleli. Izinto aziyi kuhamba njengoko bekulindelwe. Nangona kunjalo, ekugqibeleni, umntu ekubhekiswa kuye uya kufunda izifundo koku kwaye akazukuphinda enze iimpazamo ezifanayo kwixa elizayo.
Ukuba ungumntu owaziwayo, mhlawumbi umhlobo wakudala okanye isihlobo esinesikreqo emzimbeni, lo mntu unokukuvusa. iinkumbulo ezibuhlungu ephupheni.
Ukuba uphatha isiva ngeoli ye-castor ngelixa ulele, unokujamelana namava akrakra.
Uphawu lwephupha «isiva» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinkcazo yamaphupha ezengqondo, inxeba lifanekisela Amava abuhlunguengekasetyenzwa ngokupheleleyo. Yeyiphi indawo yobomi ekubhekiswa kuyo enokugqitywa kwilungu lomzimba apho unesiva ephupheni.
Okuchasene kuyinyani ukuba uphupha ukuba omnye umntu unesiva. Kwimeko apho, ngumntu ochaphazelekayo owenzakalise umntu, wamenzakalisa. I-subconscious ngokwayo ibuza umphuphi ukuba acacise indlela aziphethe ngayo. Kukho iindlela zokulungisa.
Abanye oochwephesha bengqondo babona "isiva" kwisimboli yamaphupha. imikhwa yakudala. Umntu ekubhekiswa kuye wakuphuhlisa oku ukuzikhusela kwabo ngaphambili. Kubomi bakho bemihla ngemihla, nangona kunjalo, aziseloncedo.
Uphawu lwephupha «isikhumba» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokutolika ngokwasemoyeni, amanxeba ephupheni ahlala enxulumene a Ubomi bangaphambili. Babonisa ukonzakala okwenzekileyo kule nto.